Saddex Xeer Oo Dib Loogu Soo Celiyey Golaha Wakiillada & Shirgudoonka Oo Soo Dhaweeyey Saddex Xildhibaan Oo Cusub | HAYAAN NEWS
Saddex Xeer Oo Dib Loogu Soo Celiyey Golaha Wakiillada & Shirgudoonka Oo Soo Dhaweeyey Saddex Xildhibaan Oo Cusub
Hargaysa (Hayaannews)- Golaha Wakiillada Jamhuuriyadda Somaliland ayaa ansixiyay ajandaha kal-fadhigooda 35-aad ee golaha oo furmay toddobaadkan, kaasoo ka kooban 18 xeerar oo muhiimad weyn u leh qaranka. Fadhigaasi oo ahaa kii saddexaad ee fal-fadhiga 35-aad waxaa shir-gudoominayay guddoomiyaha golahaasi Baashe Maxamed Faarax, waxaana ka soo xaadiray 52 mudane oo ka mid ah 82 xildhibaan ee uu aqalka Wakiiladu ka kooban yahay, kuwaas oo ay saddex mudane oo kamid ahi ku cusbaayeen fadhigan. Saddexdan Xildhibaan oo kala ahaa Xildhibaan/Dr. Maxamed Axmed Cabdi (Carabeyte) oo isagu buuxiyey kursigii uu ka geeriyooday alla ha u naxariistee Marxuum/Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle oo isagu ka mid ahaa mudaneyaashii golaha wakiillada ee xisbiga KULMIYE uga soo baxay gobolka Sanaag, Xildhibaan Xasan Xuseen Shide ayaa isna ka mid ahaa mudaneyaasha ku cusub fadhigan kaasioo buuxiyey kurisgii uu ka geeriyooday alla ha u naxariistee Xil. Xasan Cawaale Caynaan oo isaguna ka mid aha xildhibaannada xisbigii UDUB uga soo baxay gobolka Hargeysa. Waxaa isaguna fadhiga ku sugnaa Xildhibaan/Abwaan. Maxamed Jaamac Cabdi (Macalin Gaaxnuug) oo buuxiyey kursigii uu banneeyey guddoomiyihii hore ee golaha wakiillada ahaana murashaxii laga guulaystey ee xisbiga WADDANI Cabdiraxmaan MAxamed Cabdillaahi (Cirro) oo xisbiga UCID uga soo baxay gobolka SAAXIL.